प्रबिधि – Page3– Gokarneshwor Online News
एनसेलबाट फेसबुक चलाउन अब निशुल्क
निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो नेटवर्कमा फेसबुक निशुल्क बनाएको छ। फेसबुकसँगको सहकार्यमा ल्याइएको यो सेवा मंगलबार ग्राहकहरुले भोलीदेखि प्रयोग गर्न पाउने एनसेलले जानकारी दिएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स र फेसबुकको एसिया..
टेलिकमको एसएमएस सेवा अवरुद्ध
काठमाडौं— नेपाल टेलिकमको जिएसएम प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइलमा एसएमएस सेवा अवरुद्ध भएको छ। एमएसएसको पूरै सिस्टममा समस्या नआएको प्रवक्ता प्रतीभा वैद्यले बताइन्। 'एसएमएस सेवाको केही लिङ्कमा समस्या देखिएको हो। पूरै सिस्टम डाउन भएको होइन', उनले भनिन्, 'त्यसलाई सुधार गर्न प्राविधिक साथीहरुले काम..
तपाइँको पासवर्ड १२३४५६ त होइन ?
इन्टरनेटमा बढ्दो ह्याकिङका कारण सबैले विचार पुर्‍याएरमात्र पासवर्ड हाल्ने गर्छन्। सुरक्षा चुनौती र गोपनियता भंग हुने डरले शक्तिशाली पासवर्ड हाल्ने चलन छ। तर एक शोधका अनुसार मानिसहरुले एकैप्रकारका पासवर्ड राख्ने गरेका छन्। सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी पासवर्ड छ वटा अंक रहेको शोधमा उल्लेख छ। रिपोर्टका..
समस्या थप्दै रोबोट
रोबोटले मानिसको दैनिकीमा नराम्रो प्रभाव पार्न थाल्यो भन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला तर विकसित मुलुकमा यसले सर्वसाधारणको जागिर खोस्न थालिसक्यो । होटलहरुमा अतिथिलाई स्वागत गर्नेदेखि लिएर रिसेप्सनमा अरुका प्रश्नको उत्तर दिने काम पनि यसैले सम्हालिसकेको छ । वैज्ञानिकहरु त जागिरभन्दा अगाडि बढेर..
मोवाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न केही समय कुर्न पर्छ। एकै पटक ब्याट्री चार्च गर्न नसकिए पनि यसलाई केही छिटो भने गर्न सकिन्छ। यहाँ केही तरिका छन् जुन तपाईलाई सहयोगि हुन सक्छन्। १. मोवाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्ने मोवाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्दा सबै फङसन बन्द हुन्छन्। जसले गर्दा मोवाइल छिटो चार्ज..